သွားပွတ်တံရွေးချယ်ခြင်း ။ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံနှင့် ရိုးရိုးသွားပွတ်တံ၏ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများ - Hello Sayarwon
သွားပွတ်တံရွေးချယ်ခြင်း ။ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံနှင့် ရိုးရိုးသွားပွတ်တံ၏ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများ
မိမိခံတွင်းကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာထားရှိခြင်းဟာ မိမိရဲ့ခန္ဓါကိုယ်နှင့် စိတ်နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကျန်းမာအောင်စောင့်ရှောက်ခြင်းလိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ခံတွင်းနှင့်သွားကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေရန် အထိရောက်ဆုံးသောနည်းလမ်းကတော့ နေ့စဉ်အချိန်မှန်မှန်သွားတိုက်ဖို့ပဲဖစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားကြွင်းစားကျန်များကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သွားနှင့်ခံတွင်း ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန် သင့်တော်တဲ့သွားပွတ်တံကို ရွေးချယ်တတ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် သွားပွတ်တံတွေမှာ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံနှင့် ရိုးရိုးသွားပွတ်တံ (လျှပ်စစ်ဓါတ်နှင့်မဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် တိုက်ရသောသွားပွတ်တံ)ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်။
လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုးသုံးသွားပွတ်တံပဲjဖစ်ဖြစ် ဘယ်လိုသွားပွတ်တံအမျိုးအစားကိုရွေးချယ် သင့်တယ်ဆိုတဲ့ယေဘူယျအချက်အလက်တွေရှိပါတယ်။
သွားပွတ်တံဟာသွားများရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို အလွယ်တကူတိုက်ချွတ်နိုင်ရပြီး သွားဖုံးတွေကို ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သွားပွတ်တံခေါင်းသေးလေးဟာဆိုရင် သင့်သွားနောက်ဘက်ရှိ ချောင်ကြိုချောင်ကြားနေရာတွေထိ ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ သွားပွတ်တံလက်ကိုင်ဟာလည်း သင့်လက်ထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာကိုင်နိုင်စေလောက်တဲ့ အရှည်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံနှင့်ဆိုလျှင် သွားပွတ်တံအမွေးများကို လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သော သွားပွတ်တံအမွေးအမျိုးအစားအလိုက် သွားပွတ်တံဟာအပျော့ အမာအလယ်အလတ် ဆိုပြီး အမျိုးအစားကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ သွားပွတ်တံအပျော့ကို ရွေးချယ်ခြင်းဟာ သင့်သွားများကိုအားပါးတရတိုက်ဖို့အတွက် စိတ်အချရဆုံးဖြစ်ပါ တယ်။ သွားပွတ်တံအမွေးအမာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သွားဖုံး၊ သွားအမြစ်နေရာများနှင့် သွားကြွေလွှာများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အများစုအားဖြင့် သွားပွတ်တံကို မျှဝေအသုံးပြုခြင်းကြောင့် တံတွေးနှင့် အခြားသောခန္ဓါကိုယ်တွင်းအရည်များမှတစ်ဆင့် ရောဂါများကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မျှဝေအသုံးပြုခြင်းဟာ ခန္ဓါကိုယ်ခုခံအားကျဆင်းနေတဲ့သူများနှင့် ကူးစက်ရောဂါအခံရှိပြီးသူများအတွက် မသင့်တော်ပါ။
သွားတိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့သွားပွတ်တံကို သွားတိုက်ဆေးများနှင့် အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားဖို့ ရေနှင့်စင်ကြယ်စွာဆေးကြောပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်အသုံးမပြုခင် အချိန်အထိ သွားပွတ်တံကို လေသလပ်ခံရအောင် တည့်တည့်မတ်မတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ သင့်သွားပွတ်တံကိုအခြားသူများ၏ သွားပွတ်တံများနှင့် ရောနှောထားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
သွားပွတ်တံကိုလေလုံသောဘူးထဲထည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြင်ပဖုန်နှင့် သဲမှုန့်များကပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ သင်ထင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းဒီလိုမလုပ်သင့်ပါ။ စိုစွတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင် (ဥပမာလေလုံတဲ့ဘူးထဲမှာထည့်သိမ်းခြင်း)ဟာ လေသလပ်ခံထားတာနဲ့ ယှဉ်ရင် အဏုဇီဝရောဂါပိုးမွှားများပေါက်ပွားခြင်းကိုပိုမိုအားပေးစေနိုင်ပါ တယ်။
အနည်းဆုံး၃လ (သို့) ၄လတစ်ကြိမ်သွားပွတ်တံအသစ်လဲလှယ်ပါ။
နေ့စဉ် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သွားပွတ်တံအမွေးများဟာ ဖွာလာနိုင်ပြီး တိုက်ချွတ်မှုစွမ်းအား လျော့ကျနိုင်ပါ တယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုပုံအလိုက် သွားပွတ်တံဟာအလျင်အမြန် ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားပွတ်တံဟောင်းနွမ်းပျက်စီးမှုကို အမြဲကြည့်ပြီးလိုအပ်ရင် ခဏခဏလဲလှယ်ပေးပါ။ ကလေးသွားပွတ်တံများကိုဆိုရင် လူကြီးသွားပွတ်တံတွေထက်ပိုပြီးခဏခဏလဲလှယ်သင့်ပါတယ်။
သွားပွတ်တံရွေးချယ်ခြင်း။ ရိုးရိုးသွားပွတ်တံ (သို့) လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံ
မှန်ကန်တဲ့နည်းနစနစ်နှင့် အချိန်မှန်မှန်အမြဲသွားတိုက်ခြင်းဟာ ဘယ်လိုသွားပွတ်တံကိုသုံးသုံး ခံတွင်းထဲရှိအညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး သင့်သွားနှင့် သွားဖုံးများကို ကျန်မာကြံ့ခိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော် ပြပါအချက်များဟာမိမိအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် သွားပွတ်တံကိုရွေးချယ်ရာမှာ သိထားသင့်တဲ့အချက် များဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်လောက်တဲ့ တန်ဖိုးနည်း လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံများရှိပေမယ့်လည်း ရိုးရိုးသွားပွတ်တံနှင့်ယှဉ်ရင် လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံဟာ အဖိုးအခပိုများပါတယ်။ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံ အဖိုးအခများသည့်အပြင် ရိုးရိုးသွားပွတ်တံများကို မကြာခဏလဲလှယ်ပေးရသလို လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံခေါင်းကိုလည်း မကြာခဏလဲလှယ်ပေးရပါတယ်။ အကယ်၍ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံသုံးခြင်းဖြင့် သင့်သွားများကိုပိုမိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရင် သွားရောဂါဆိုင်ရာအဖိုးအခများ လျော့ကျစေနိုင်တဲ့တွက် ချင့်ချိန်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင်အသုံးပြုမယ့်သွားပွတ်တံဟာ အမြဲတမ်းအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်နှစ်ခြိုက်မှုပုံစံနှင့် ကိုက်ညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အချို့သောသူများဟာ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံရဲ့တုန်ခါခြင်းကို မနှစ်သက်ကြပါ။ အချို့သောသူများကတော့ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံဟာသွားများကို သန့်ရှင်းစေရာမှာ ပိုမိုလွယ်ကူတယ်လို့ ထင်မြင်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ ခံစားနေရသူတွေအတွက် လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံအသုံးပြုခြင်းဟာ ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။ သင့်သွားပွတ်တံကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် (၂) မိနစ်အပြည့် သွားတိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောလျှပ်စစ်သွားပွတ်တံများမှာဆိုရင် လုံလောက်တဲ့သွားတိုက်ချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စနစ် ပါရှိပါတယ်။
လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံနှင့် ရိုးရိုးသွားပွတ်တံတို့ရဲ့ သွားဖုံးရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် စားကြွင်းစားကျန်များဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းစွမ်းရည်ကို မြောက်မြားစွာသောသိပ္ပံနည်းကျရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံနှင့်ရိုးရိုးသွားပွတ်တံရဲ့စွမ်းရည်ကို နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ လေ့လာချက်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကတော့ အဆိုပါသွားပွတ်တံ(၂) ခုရဲ့ သွားဖုံးရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် စားကြွင်းစားကျန်များဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းစွမ်းရည်ဟာ သိသိသာသာကွာခြားခြင်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် လျှပ်စစ်သွားပွတ်တံအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Rotation Oscillation Toothbrush (ဒီသွားပွတ်တံအမျိုးအစားဟာဆိုရင် သွားပွတ်တံမွေးများဟာ ရှေ့နောက်ဘယ်ညာအရပ် အားလုံးသွားပြီး အညစ်အကြေးများကို တိုက်ချွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်) ဟာသာမန်သမာရိုးကျသွားပွတ်တံထက် ပိုမိုထိရောက်တယ် ဆိုသောအထောက်အထားများရှိကြောင်းေ ဖာ်ပြထားပါတယ်။
ChoosingaToothbrush: The Pros and Cons of Electric and Disposable. http://www.webmd.com/oral-health/guide/choosing-a-toothbrush-the-pros-and-cons-of-electric-and-disposable.
Toothbrush Care: Cleaning, Storing and Replacement. http://www.ada.org/en/about-the-ada/ada-positions-policies-and-statements/statement-on-toothbrush-care-cleaning-storage-and-